Izindlu zangaphandle - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguEinar
Elona xesha lincinci lokuqeshisa ngendlu zintsuku eziyi-3.
Xa iindwendwe zifika zingangena endlini ngo-16:00. Xa iindwendwe zifika kufuneka zithathe ibhedi ecocekileyo-zize zilungise iibhedi ngokwazo zize zihambe ukuze zithathe amashiti asetyenzisiweyo (ilinen yebhedi) neetawuli zize zizibeke kwibhaskithi kwigumbi lokuhlamba. Ngaphezu koko, xa luhamba ngo-12:00 (emini) undwendwe lucelwa ukuba lushiye indlu ikwimeko ebikuyo xa lufika. Ukucoca ngumsebenzi wondwendwe(iindwendwe).
I-YTRI-HÚS: Indlu yeholide e-NW Iceland.
Indawo yeholide enamagumbi aliqela (iimitha eziyi-135 square) embindini weWestfjord-promotory entle. Ilungele ukuhlola yonke indawo ye-West-fjord ngosuku ukuya ngasentshona (eyona miqolomba yeentaka inkulu eYurophu) kunye nomntla (i-Isafjördur yeyona dolophu inkulu kule ndawo). Njengesiqalo sokundwendwela ezona zinto zinomtsalane eNW Iceland. Indawo ekuyiwa kuyo kwiindawo ezingaqhelekanga. Kwiimayile ezimbalwa kukho iindlela ezininzi zokunyuka intaba neeleta ze-K ezintabeni. Indlu enazo zonke izinto ezenza ukuhlala e-Iceland kube mnandi.
Indawo: I-Núpur, i-Dýrafjördur; eyona fjord isembindini ye-The Westfjord peninsula, ekwikhilomitha eziyi-37 kuphela ukusuka e- Řsafjördur, eyona dolophu inkulu kwiifjords zasentshona. Indawo entle yohambo kuzo zonke iindawo kwi-West-fjord peninssula. Indawo entle neyahlukileyo. Umgama:
Umbuki zindwendwe ngu- Einar
Ngefowuni (EJ) 8489395 kunye/okanye i-imeyile
einarrjonnger@gmail.com Umnikazi akakwazi ukulubuyisela undwendwe(iindwendwe) endlini (ngenxa yomgama). Kuqinisekisiwe ukuba undwendwe lungafika kwindlu- isitshixo ngokufaka ikhowudi yokungena kwibhokisi encinci yangaphandle. Ibhokisi ibekwe ecaleni komnyango ongaphambili. Undwendwe luza kufumana ikhowudi nge-imeyile ngqo kumnikazi ubuncinane iveki enye ngaphambi kokuba iqeshwe.
einarrjonnger@gmail.com Umnikazi akakwazi ukulubuyisela undwendwe(iindwendwe) endlini (ngenxa yomgama). Kuqinisekisiwe uk…